Hiran State - News: Madaxweynaha Somaliya oo ka yaabiyey aduunyada kedib markii si cad loogu sheegay iney doorashii dhaceyso iskana iloobo waqti kordhin kale.
Madaxweynaha Somaliya oo ka yaabiyey aduunyada kedib markii si cad loogu sheegay iney doorashii dhaceyso iskana iloobo waqti kordhin kale.
Kenya:- Golaha Amaanka ee QM ayaa waxaa ka soo baxay go'aamo ku aadan khilaafka u dhaxeeya madax Dowladda KMG iyagoo maanta kulan qaatay in ka badan 7 saacadood kula yeeshey masuuliyiinta dowlda oo waliba iyagu loola kulmay si gooyni gooyni ah waxa lagala hadlayona waa dalkoodii .
Masuuliyiinta Dowladaha Britian iyo South Afrika ee QM iyo wakiilka Gaarka ah ee QM u qaabilsan Arimaha Soomaaliya Mahiiga oo shirjaraa'id si wada jir ah ugu qabtay Nairobi caawa ayaa waxaa fariin ku socotay TFGda oo waliba aheyd midii ugu danbeysay ee loo soo jeediyo masuuliyiinta iyagu diidan iney wadanka ka dhacdo doorasho iyo qilaafka xukumada goobta ka aqriyey Danjiraha dalka Ingariiska ee QM.
Danjiraha ayaa sedax qodob oo kaliya ku soo koobay shirkiisii jaraa'id oo ku socotay TFGda isla markaana laga soo saaray shirka Golaha aaanka.1- Qodobka Koowad waxaa si amar ah lagu yiri in loo baahan yahay qasabna ay ku tahay madaxda TFGda in ay joojiyaan khilaafka u dhaxeeya islamarkaana ay iska iloobaan mudo kordhinta ay ku riyoonayaan oo aan cidi la ogeeyn ama aan sharciga waafaqsaneeyn, waxaana la cadeeyey in xiliga Dowladda uu ku egyahay bisha 8aad loona bahan yahay baa la yiri in Doorshooyin ay diyaariyaan Madaxda Dowladda mudada yar ee ka hartay xiliga kala guurka.
2-Qodobka Labaad ayaa lagu sheegay in madaxda TFGda looga baahan yahay in waqtiga ay heeystaan ay ku bixiyaan sidii looga gudbi lahaa nidaamkaan hada jira ee kumeel gaarnimada ah loogana diyaariyo wadanka doorasho.
3-Qodobka Sedaxaad ayaa lagu cadeeyey in dhamaan qeybaha Soomaalida looga baahan yahay in ay iskaashi muujiyaan oo ay la shaqeeyaan Ergayga gaarga ah ee QM Mahiiga, waxaana lagu faray dhamaan dhinacyada Soomaalida in ay ka soo qeyb galaan shirka wadatshiga ah ee bisha Juun lagu qaban doono magaalada Muqdisho kaasi oo ay qaban qabisay xukuumada, waxaana la cadeeyey in shirkaasi lagu sheegay wadatashiga uu garwadeen ka noqon doono wakiilka QM u qaabilsan arimaah Soamliya Agustiina Mahiiga.
Go'aamada ka soo baxay golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay waxuu horu dhac u yahay faragalin dhinaca ciidanka ah oo lala damacsan yahay dalka Somaliya sida Libiya oo kale.
Wakiilka Golaha Amaanka ee dalka Biritin ayaa sheegay in go'aamadaani ay yihiin kuwa ay u dhan yihiin oo ay isu raacsan yihiin Golaha Amaanka ee QM, waxaan madax Dowladda loo sheegay in haatan wixii ka dambeeya uu jiri doono la xisaabtan. sida uu sheegay wakiiilka QM waxuu yiri go'aanadaan waa mid ay u dhan yahiin QM,IGAD,Midoowga Afrika iyo dhamaan Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Somaliya oo la filayey inuu joogi doono ilaa maalinta berito ah sida u qorsheysneyd QM midoobay oo iyadu shirka ku casuuntay ayaa hal mar laga war helay inuu garoonka diyaaradaha si toos ah u aaday oo uu Mogdisho dib ugu laabtay kedib markii ay u cuntami weysay canaan uga timid beesha caalamaka oo maanta si gooyni ah loogu canaantay halka uu ka keenay inuu mudane baarlamaan oo wadanka ka dhoofayo oo u socda siminaar uu ku soo rogo xanibaad kana baajiyo howlahoodii shaqo. sidoo kale waxaa farta laga saaray waqad ka careysiisay oo loogu sheegay in aysan madaxweyne u aqoonsaneyn beesha caalamka waxiika danbeeya bisha 8aad oo ah mudada ay ku eg tahay waqtigiisa.
Warar aan la xaqiijin walito oo inaga soo gaaraya caawa magaalda Mogdisho ayaa sheegaya inuu madaxweynaha aad uga xanaaqay talooyinkii maanta la siisay. marka laga soo tago shirak jaraa'id ee maanta ay qabteen masuuliyiintaan hadane madaxweynaha waxuu Mogdisho u qaatay warqad loogu sheegay in uusan waqti kale u harin bisha 8aad waxiika danbeeyana ay aqoonsan doonaan cidii lagu doorto doorashada soo socota mudadaasi inta ka horeysana ay xaliyaan xilaafkooda micno darada ah.
Waxaa kale oo iyaduna xusid mudan in madaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif masuuliyiin isku diyaarineysay iney caawa la kulmaan ay hal mar ka war heleen inuuba ka dhoofay dalka Kenya.
Hadaba la soco wararkeena danbe
· admin on May 26 2011 00:04:59 · 0 Comments · 1766 Reads ·
14,586,044 unique visits